जब समुन्द्रमा विष घोलिएर सबै प्राणीको मृत्यु गर्ने गरी आयो तब यसरी निलेर ६० हजार बर्ष यही ठाँउ रहे « Janaboli
जब समुन्द्रमा विष घोलिएर सबै प्राणीको मृत्यु गर्ने गरी आयो तब यसरी निलेर ६० हजार बर्ष यही ठाँउ रहे
काठमाडौं । ऋषिकेश निलकंठ पवित्र महादेव मन्दिरहरु मध्ये एक हो । यो मानिन्छ कि भगवान शिवले यसै यस स्थानमा समुद्रमा घोलिएको विष सेवन गरेका थिँए । विषको प्रभावले उनको गला नीलो भएको थिँयो र यसकारण यसलाई निलकंठ नामले चिनिन्थ्यो । जब समुन्द्रमा विष फैलिएर सबै प्राणी नष्ट हुने अन्तीम अवस्था आयो तब भगवान भगवान शिवले अरु प्राणीलाई बचाउँन त्यो सबै विष आफैंले पिएका थिँए ।
भगवान शिवको विषाक्त पदार्थको प्रभावले गला निलो भएको थियो । शास्त्रहरुमा भनिएको छ कि भगवान शिवले यस स्थानमा साठी हज़ार वर्षसम्म यस स्थानको नजिक रहेर विषको प्रभावलाई शान्त गरेका थिँए । भगवान शिव जुन रुख नजिकै समाधिस्थ भए पछि गएर त्यो रुख नजिक नैं स्वयम्भु लिगंको रुपमा प्रकट भए ।
आज पनि मन्दिरमा भएको शिवलिगंमा निलो चिन्ह देखिन्छ । साउनको महिनामा, लाखौं भक्तहरू निलकंठ, कांवड लिएर आउँछन । कांवडमा गंगाजल हुन्छ र त्यही गंगाजलले भगवान शिवको अभिषेक गर्दछन । हरेक शिवरात्रीमा यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ । भक्तहरू बाबाको आँखा हेर्नका लागि टाढाका ठाउँहरूबाट यहाँ आउँछन्।
अब एकैछिनमा चन्द्रमा रगतको लप्काले छोपिनेछ, देखेर कराउनेछन् जंगलमा ब्वाँसाहरु
एजेन्सी । अब सन् २०१९ को पहिलो चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । आज अर्थात २१ जनवरीको राति
अहिलेको चन्द्रग्रहणमा यी कार्य गरे खेप्नुपर्नेछ निक्कै ठूलो क्षति
काठमाडौ । अब केही समयपछि चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । ग्रहणले स्पर्श हुनुभन्दा नौ घण्टाअघि देखि बाल,
आजको ग्रहण समय राति ९:१८ बजेदेखि १२:३५ यी कार्य गरे नसोचेको लाभ
जनबोली धार्मिक ब्यूरो । आज माघ ७ गते सोमबार आज चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । आज लाग्ने चन्द्रग्रहण
आज धार्मिक रुपमा यस वर्षकैं उच्च महत्वको दिन ! [यसरी सुरु गर्नुहोस् श्रीस्वस्थानी व्रतकथा ?]
काठमाडौं । धार्मिक ग्रन्थहरुमा ब्याख्या गरिएको छ कि एक हप्तामा हुने सात दिनको फरकफरक महत्व